Maal haa baasuuf dhama raasuu? – Welcome to bilisummaa
Hogganooti ODF kun gariin isanii warra Ethiopiummaan summawanii dha waan taheef yaada kana hin fudhatan jedheen yaada. Sababiin isaas habashooti seenaa isanii keessatti karaa nagaa tahanii rakkoo furuu akka hin dandeenye isanumatu nutti himaa ture waan taheef , isaan walii isaniittu barcuma ykn aangoo ajechaan malee karaa nagaa waliif dabarsanii hin beekan kun ammoo nama seenaa impa’irattii beekuuf waan haraa miti
Kan biraan ammoo waanuma akka nama indaqqoo mana keessaa ari’uutti arihimaniif jecha waggaa dheeraaf MQBO diigaa turun godaannisa ilmaan Oromoo keessa hin baane tahee hafa. kana senaan hin dagatu.”Loon Abbaan gaafa cabse hormi ammoo ija jaamsaa jedha oromoon yammu makmaaku ”Kanaaf akkan yaadutti warri akkasitti yaadan kun akkuma isheen jette akka nama tokkootti galuutu isaniif furmaata. Sababnni isaa Ethiopia karaa demokiraasii ykn olaantummaa Oromoon ijaaramtu agarra jedhanii abjochuun hanqaaquu bofaa irra ilmoo gugee eeguu dha.
Warri haalli kun utuu hin galiniif waan kana jala ya’aa turan ammoo osoo yeroo itti hin kennin Dhaaba isanitti deebi’anii MQBO gabbisuun of tasgabbeessanii harka wal qabchuun karaa diinni kun ittin jilbenfattee oromoo waliin haasoftu ykn biyya ofii irraa baatu mijeessuu innis innis fincila uummataa, karaa diplomaasii, siyaasaa qeerroo jabeessuu fi karaa waraana ti.
Rakkoon oromoo inni guddaan tokko dhiifama wal gaafachuu fi badii fudhatanii wal fudhaciisuu dha fudhachuu karaa wayyabi fedhu irra deemuu dadhabuu dha . kan nama aja’ibu yoo jiraate arrabi diina dhiifama gaafatu akkamitti walii isaaf dhiisuun itti ulfaata yoo dhugaan kan saba ofiif yaadan tahe? Beekaas tahe osoo hin beekin dagoggoraa fi badii saba ofii irratti hojjetaniif osoo dhiifama hin gaafatin yoo darban godaannisa seenaa tahee hafa. Lafa irrattis tahe Rabbi biratti gochaa abaaramaa dha .Kan badii fi dogogora ofii amananii fudhachuun beekaa nama taasisa beekaa dha. Sababnni isaas kan hojjetutu dogoggora waan taheef.
Ammaaf yaadi koo kanuma Galatoomaa.
Tags ADO MQBO ODF
Previous ODF ilaalchise yaadni dhuunfaa ani qabu maal fakkaata?
Next Gaafiif deebisaa OBS wallisaa Oromoo Obboo Nuhoo Mohamed waliin taasise